PNGGAUNTLET FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Otu n'ime usoro mgbasa ozi nke oge a bụ usoro PNG. Ọ kachasị mma iji ya maka ịdebe foto na Ịntanetị. Ma, ihe kachasị mma maka faịlụ ndị e mere iji tinye na web weebụ zuru oke dị arọ. Kedu ngwa nwere ike iwepụta faịlụ PNG dị ka o kwere mee? Otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma maka imebi ụdị ọdịnaya a bụ usoro PNGGauntlet.
Ngwa PNGGauntlet n'efu na-arụ ọrụ nke ọma na-agbanye foto PNG maka ịdebe na Ịntanetị, yana maka nzube ndị ọzọ.
Anyị na-akwado ịhụ: mmemme ndị ọzọ maka mkpakọ foto
Njikarịcha, site na mkpakọ, nke foto na usoro mgbasa ozi PNG bụ ọrụ bụ isi nke ngwa PNGGauntlet. Ihe bara uru na-egosiputa otu n'ime njirimara kachasị mma nke faịlụ nke usoro a n'etiti mmemme ndị ọzọ yiri ya. Usoro njikarịcha maka onye ọrụ dị nnọọ mfe ma dị omimi.
Enwere ike inweta ọrụ dị elu site n'iji ngwaọrụ atọ wuru ewu na-arụ ọrụ na ndabere: PNGOUT, OptiPNG, Defl Opt.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na ị depụtara ọrụ kwesịrị ekwesị na ntọala zuru ezu nke usoro ihe omume ahụ, ọrụ ahụ ga-enwe ike ịhazi JPG, GIF, TIFF na faịlụ BMP, na-agbanwe ha na usoro PNG na mmepụta.
Uru nke PNGGauntlet
Mmetụta dị elu nke faịlụ PNG;
Ikike igbanye usoro faịlụ;
Uzo a bu oke n'efu.
Ọghọm dị na PNGGauntlet
Enweghị enwe asụsụ asụsụ Russian;
Na-arụ ọrụ na Windows n'elu ikpo okwu.
Dị ka ị nwere ike ịhụ, ọ bụ ezie na usoro PNGGauntlet ejedebe na arụmọrụ, mana ọrụ ya bụ - mkpakọ nke foto nke PNG, ọ na-edozi karịa ọtụtụ analogs, ọ dịkwa mfe ịhazi.
Download usoro PNGGauntlet maka n'efu
OptiPNG Nrụkọta mpịakọta JPEG dị elu Cesium Kọmputa kachasị mma mkparịta ụka
PNGGauntlet bụ ngwa dị mfe, nke dị mfe iji tinye akwụkwọ faịlụ na PNG ewu ewu.
Onye Mmepụta: Ben Hollis